6 Oge Khloe Kardashian na Tristan Thompson nyere anyị #CoupleGoals
6 Oge Khloe Kardashian na Tristan Thompson nyere anyị #CoupleGoals Tupu akụkọ aghụghọ ahụ.
Otu onye edemede nwere mmasi, onye kwupụtara onye isi nri na egwu egwu…
Nchịkọta GABRIELLE UNION Maka New York & Islọ ọrụ Bụ Brọd-Chic Bomb!
New mama Khloe Kardashian nwanyị bụ nwanyị siri ike na-eguzogide onwe ya n'etiti ụdị aghụghọ ahụ nke mebiri enyi ya nwoke na nna nwa ọ mụrụ ọhụrụ, NBA player. Tristan Thompson, ejidere na ebubo na ọ na-aghọ aghụghọ na kpakpando n'ezie, ihe kariri otu mgbe! Ọ bụ ezie na ọ dị ka njedebe nwere ike ịdị nso maka di na nwunye ahụ, dịka isi mmalite si kwuo (n'agbanyeghị na ha nwere obi ụtọ ugbu a na nnukwu ọ joyụ ha), anyị enweghị ike inye aka kama iche echiche oge niile anyị jiri #coulplesgoals oge ọ bụla anyị hụrụ ọmarịcha nhazi ha dị mma.
ma Tristan Thompson na Khloe Kardashian nwere ihe maka ime ọdịdị di egwu. Site na ụbọchị ruo n'abalị oge anya, di na nwunye ahụ na-ele anya igwefoto mgbe niile; mana nke ahụ abụghị ihe ijuanya mgbe gị na a Kardashian. Akụkụ kacha mma? Onye ọkpụkpọ Cleveland Cavaliers maara etu esi adaba na anya nwanyị ya n'agbanyeghị ihe ọ na-eyi. Nke ahụ ọ́ bụghị ihe kasị atọ ụtọ?
Nke a bụ ugboro 6 anyị n'ụzọ nkịtị #couplesgoals gaa Khloe na Tristan's…
Ebe E Si Nweta Foto: Ọchụchọ Google | Peoplemagazine, nweta ya
N'ime olee ụdị anya ị ga-achọ ka gị na ndị ọzọ dị mkpa rahụ n'anya? I chere na ha chere ha #CouplesGoals egwuregwu egwuregwu?
celebrity Zọ Ndị A Na-ewu ewu Khloe Kardashian ọkaibe ọhụụ ndị mmadụ magazin Tristan Thompson
Otu onye edemede na-anụ ọkụ n'obi, onye kpọpụtara onwe ya onye siri nri na onye hụrụ egwu na ịgba egwu n'anya. Na ụwa m, ọ bụghị ihe dị ka anwụ ma ọ bụ mmiri ozuzo. Na Style Rave, anyị bu n’obi gbaa ndị na-agụ akwụkwọ anyị ume site na ịnye ọdịnaya ọdịnaya ka ọ bụghị naanị ịme ọnụ kama ka ha gwa gị ma gbaa gị ume ka ị na-ASPIRE ka ị nwekwuo nka, na-ebi ndụ karị ma nwee ahụike. Soro anyị na Instagram @StyleRave_ ♥
Ihe ijuanya! Etu ị ga-esi bụrụ ndị ọbịa kachasị mma maka ụdị agbamakwụkwọ ọ bụla
Ndepụta Miri Mma kachasị mma: Ihe Ngosi Nwoke Afrịka Afrịka Nwetara Anyị Ulo Eke N’afọ gara aga